Foibe Akamasoa – Airtel: tanjona ny hialana amin’ny fahantrana | NewsMada
Foibe Akamasoa – Airtel: tanjona ny hialana amin’ny fahantrana
Teny amin’ny foibe Akamasoa, Mangarivotra, ny Airtel, ny herinandro lasa teo, ankatoky ny nahatongavan’ny Papa Fransoa. Fotoan-dehibe ho an’ny Airtel nanehoany ny hafaliany manampy ireo ankizy eny amin’ny Akamasoa, tarihin’ny mompera Pedro Opeka, io. Miisa 10 000 ny T-shirts natolotry ny Airtel ho an’ireo ankizy eny an-toerana ho fanomana ny fankalazana ny faha-30 taona niorenan’ny foibe Akamasoa.
Hatramin’izay 30 taona izay, 500 000 ireo nitondran’ny mompera Pedro fanampiana, nanorenana trano 3 000, ka mipetraka amin’ireny trano ireny izao ny 25 000. Tanjona ny hanala azy ireo ao anatin’ny fahantrana, hiaina araka ny maha olona azy, hanomezana azy trano fonenana, asa, indrindra ny fanabeazana sy ny fampianarana. Hevitra fototra zarain’ny Airtel izany hanomezan-danja ny fanajana ny maha olona sy ny fiaraisankina.
« Rehareha ho anay ny mitondra fanohanana ho an’ny foibe Akamasoa, ary manaiky izao ezaka vitan’ny mompera tsy manan-tsahala izao izahay, mitondra fanampiana ho an’ireo mahantra, indrindra ny ankizy sy ny tanora hoavin’ny firenena », hoy ny tale jeneralin’ny Airtel, i Eddy Kapuku.